I-Aliexpress-ivenkile ye-intanethi ye-elektroniki, izinto ezinqabileyo zemfashini, iithoyi, iimpahla zasekhaya
I-AliExpress-ivenkile ye-Intanethi yeemveliso ezifikelelekayo ezaziwa ngumntu wonke
Iifowuni kunye nezixhobo
Ikhompyutha kunye neOfisi
Amathoyizi, abantwana kunye nosana
Ubucwebe kunye neewotshi
Iingxowa kunye nezihlangu
Ikhaya kunye neGadi, Ifenitshala
Iimoto kunye neeMoto
Impilo kunye nobuhle, Izinwele
Ezemidlalo kunye nangaphandle
Akukho msebenzisi we-Intanethi ongazange atyelele indawo yentengiso ebizwa ngokuba yiAliExpress. Eli liqonga lehlabathi elibonakalayo lokuthengiswa kwezinto ezahlukeneyo zentengiso yamaTshayina. Uncedo lwesitolo se-intanethi luhlahlo-lwabiwo mali lweemveliso. Akunakwenzeka ukuba ungakhankanyi i-assortment enkulu yenkokeli yehlabathi kurhwebo lwe-Intanethi.
I-Aliexpress ithengisa iimpahla kwivenkile nakwiindawo ezininzi. Iprojekthi ye-Intanethi i-AlibabaGroup ithathwa njengenye yezixhobo ezandwendwayo kakhulu kwiwebhu, kwaye iyahluka ekusebenzeni kwayo (ukuguqulelwa ngokuzenzekelayo kolwazi lwendawo kwiilwimi ezahlukeneyo, ubukho beefilitha zokuhlelwa kwezikhundla, njl. Njl.).
I-AliExpress , ungathenga nayiphi na imveliso eboniswe kwindawo
Inkonzo iguqulela ngokuzenzekelayo idatha malunga neqela ngalinye leqonga elikwi-intanethi ukuze abasebenzisi babe nethuba lokufunda ngeempawu zeemveliso, babuze malunga nobungakanani obufumanekayo, njl.
Yiya kwiAli Express
Luyintoni uqinisekiso lwevenkile ye-Intanethi eyenziwe?
Ikhathalogu ye-AliExpress inamacandelo ali- 13 ahambelana noluhlu lweendidi ezinikezelwa kubathengi abangasekunene ,
elungele ukufumana iimveliso eziyimfuneko. Ekuqaleni koluhlu kukho izinto zasekhaya, iifowuni, iiPC, izixhobo zeofisi kunye neempahla zombane,
kuba ezona zinto zifunwayo phakathi kwabathengi. Thenga kwi-AliExpress iimodeli ezintsha zeselfowuni kunye nezinye izimangaliso zeteknoloji azikho
iya kuba ngumsebenzi:
Ngaphezulu kwiphepha eliphambili kukho ibha yokukhangela;
Kubukho becandelwana leemveliso ezintsha, izaphulelo zomzuzu wokugqibela, njl .;
Kukho ukhetho lwezoqoqosho lweemveliso ngexabiso "lokufikelela kwi-5 yeedola".
Ukuhambahamba kwabasebenzisi beqonga le-intanethi le-AliExpress kwi-ruble
Amacandelo angumxholo abonelela ngokongezwa kwemveliso kumaqela aneenkcukacha. Udidi "lwezinto zabantwana" ngokuzenzekelayo luza kwabelana nabavelisi abavela eTshayina, besenza amaqela amancinci (iidayile, izihlangu, izihlalo zemoto, njl.njl).
Into ethandwayo inokuhlala yongezwa kwiCart okanye kwiMinqweno yam. Inani lezinto ezinokuthengwa ziboniswe phezulu kwi-icon ukuze emva kokukhangela umthengi angalibali ukubeka iodolo. I-Aliexpress iya kuqondakala kutyelelo lokuqala, kuba kwanabaqalayo banokwenza isigqibo sibulela ukuqokelelwa kolwazi:
Intlawulo kunye ne-AliExpress Izipesenti
Omnye amandla e-AliExpress ngeendlela zayo ezininzi zokuhlawula. Abasebenzisi banethuba lokuhlawula ngamakhadi ebhanki (MasterCard, Visa, Maestro) okanye basebenzise iinkqubo zokuhlawula ngombane. Intlawulo ngefowuni ephathekayo kunye nokudluliselwa kwemali nazo ziyafumaneka. Kwiindwendwe ezintsha zevenkile ye-intanethi kukho inani lezinto ezikhethekileyo. Iingcebiso ezinokukunceda ugcine kokuthenga kwakho okulandelayo nokulandelayo:
Iibhonasi zokubhalisa kwi-portal;
Izaphulelo zokufaka usetyenziso.
Umzekelo wokukhuthaza ukukhangela yiprojekthi ye- AliExpress. Iwebhusayithi esemthethweni enonxibelelwano olucacileyo, ukuhambisa lula, inani elinomtsalane kunikezo oluvela kubavelisi baseTshayina, ukuhlelwa ngokuchanekileyo kweempahla kwiindidi-kwaye olu ayilo luhlu lonke lwezibonelelo zeqonga lokurhweba kwi-Intanethi.
Iqela lethu lilingana neenkokeli zesithuba se-Intanethi. Siyinkonzo enobuchule obuhlukileyo bobuchwephesha, obenegalelo ekukhuthazeni ngokukhawuleza indawo kwi-TOP. Isiqinisekiso esipheleleyo sesiphumo - kwimeko yokusilela ekufezekiseni imbuyekezo ebekiweyo! Zabalazela okungakumbi - wathembela kwiingcali zokwenza injini yokukhangela!